युवाहरूमाझ आत्महत्या लोकप्रिय !
लन्डन–भारतमा अल्पायुमै मृत्युवरण गर्नेको संख्या बढिरहेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ । लेन्सेन्ट कमिसनद्वारा मंगलबार जारी रिपोर्टमा युवा भारतीयले आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेको र यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । लन्डनको युसिएल इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थद्वारा आयोजित कार्यक्रममा लेन्सेन्ट कमिसनको रिपोर्ट जारी गरिएको थियो, जसमा किशोर स्वास्थ्य र स्वस्थ जीवनबारे तात्तातो बहस गरिएको थियो ।
निराशाको खतरा कसलाई बढी ?
बेलायतका अध्येताका अनुसार किशोरावस्थामा असल व्यवहार नपाएका, शोषणमा परेकाहरूमा डिप्रेसनको सिकार हुने गरेका छन् । बिएमजे पत्रिकामा छापिएको रिपोर्टअनुसार किशोरावस्थामा प्रताडित भएका मानिसले पछि बढ्ता निराशामा जाकिने गरेका छन् ।
किशोरावस्थामा कुनै प्रिय सामग्री हराएको, तिनीहरूबारे झूटो फैलाइनाले, कुटपिट वा ब्ल्याकमेल गरिने जस्ता घटना भोग्नेहरू पनि बढी निराशाको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ ।
यो अध्ययनका लागि ४ हजारभन्दा बढी १३ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई प्रश्न सोधिएको थियो । पाँच वर्षपछि उनीहरूको निराशाको तह परीक्षण गरिएको थियो । अध्येताले पाए, प्रत्येक साता कम प्रताडित हुने ६ सय ८३ जनामध्ये १५ प्रतिशत १८ वर्षकै उमेरमा अवसादले ग्रस्त थिए ।
युवावस्थामा अवसादका थुप्रै कारण हुन सक्छन् । पारिवारिक समस्या, कुनै नोक्सानी, कुटपिटजस्ता कुराहरू निराशाको कारण बन्न सक्छन् । प्रताडनाविरुद्ध विद्यालयहरूमा चलाइएका कार्यक्रम भने खासै प्रभावशाली हुन सकेका छैनन् । यदि किशोरावस्थामा आफ्ना सन्तानलाई जति बढी त्यस्ता अनुभव वा घटनाबाट जोगाउन सक्यो, तिनीहरूको निराशाको तह उति कम हुने र आत्महत्याको क्रम त्यति नै घट्न सक्ने शोधकर्ताको धारणा छ ।
धोनीप्रति विश्वस्त देखिएनन् गांगुली
नयाँ दिल्ली–ब्याटिङ हस्ती सौरभ गांगुलीले २०१९ को विश्वकपसम्म महेन्द्रसिंह धोनीले नेतृत्व गर्न सक्नेमा छनोटकर्ताहरू विश्वस्त नभएसम्म उनलाई सीमित ओभरमा पनि भारतीय टोलीको कप्तानी जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने बताएका छन् ।